IParis Stock Exchange inoramba ichiita tsvuku masikati (-0,63%) - TELES RELAY
HOME » upfumi »The Paris Stock Exchange inoramba ichiita tsvuku masikati (-0,63%)
IParis Bourse yakaramba iri muChishanu chekupedzisira pamasikati (-0,63%), kuisa pause mushure memazuva matatu ekukwirirana kwekukwirirana, ichiri kukanganisirwa nemakakatanwa ekutengeserana.
Pachine 13H35 (12H35 GMT), index yeCAC 40 yakarasikirwa neP34,08 points pa 5.414,03 points, mune yebhizimusi ye1,4 mabhiriyoni emadhora. Zuva rakapfuura, akanga apedza 1,37%.
Nhamba yeParis yakasununguka pasina kushandura mberi gare gare.
Kune rumwe rutivi, Wall Street yakanga iri kugadzirira kuvhura. Dow Jones Industrial Average index futures contract yakagurwa ne 0,52%, 0,49% yakawandisa S & P index uye 0,64% s teknolojia yekutonga Nasdaq.
"The Các 40 airidza yoyo kubva pakutanga vhiki panguva chero paangodira pakati rebounds ari kutengeswa hondo uye zvinonetsa pamusoro upfumi kutenderera," akataura mune katsamba Dembik Christopher, musoro kutsvakurudza mune zvemari pa Saxo Bank .
The kutengeswa kusanzwisisana US uye China atora rimwe divi idzva kubva Wednesday, Washington kunze rinorema atirari mukugadzirwa kwezvinhu zvekutepfenyura achiedza neutralize Huawei, musimboti mutambi ari Mobile network uye 5G zvikuru.
Pane zvikwangwani zvishoma, kuwedzera kwehupfumi kwakanyanya kusimba kudarika gore rakapera muFrance, pa1,7% pane 1,6% yakaparidzirwa kare, maererano neInSEE.
IEurope yemotokari yemusika yakava yayo 0,4% inowanikwa mugore-negore mugore raApril, iyo yechisere mushure mutsva wekuderera, yakayerwa neUnited Kingdom neGermany, asi vaFrench van automakers vakakwanisa kufambira mberi, maererano nenhamba. yakabudiswa musi weChishanu.
- Vallourec inoshongedza SBF -
On tsika mberi, Vallourec akanga mberi SBF 120 (+ 9,47 2,46% muna euros), kwakakurudzira nokuda weboka zvinenge zviviri yayo mambure kurasikirwa rokutanga kota 2019.
Renault yakanga iri pasi 1,56% pa51,19 euros, kunyange kunyorwa kwayo kwakakonzerwa ne1,8% muEuropean Union muna April, maererano nematareji anobva ku Association of European Automobile Manufacturers (ACEA).
Nissan asarudza zvikuru overhaul pepuranga kwayo, vachiita chiratidzo kune nokubvuma Renault ari kupinda CEO kwayo, Thierry Bolloré, apo Japan mugadziri iri simba Ghosn mhosva uye dzakaipa kwazvo zvabuda.
Wendel akarasikirwa ne2,83% kusvika ku120,20 euros, akapomerwa nekuderera kwemirauriro yaro kuti "chengeta" neCommé Générale pamusoro pe "kutenga" kare. Imwe kambani yekutsvaga kwekutsvaga yakave yakashuma musi wechina kuwedzera kwekutsvaga kwayo kwe4,1% kusvika ku2,05 mabhiriyoni ehurukuro yekutanga, inotungamirirwa kunyanya nesangano rayo reBeritasas.
Musoro weBoiron wakaramba wakasimudzirwa kubva pakurongwa. Dzimba rekushaya mishonga rakamisa musi weChina musika wayo wekutengeswa, achizvidza "kuputsa kwekuvanzika" kwepfungwa yekutanga yeHigh Authority yeHutano (HAS) pakuongororwa kwezvokurapa kunobatsira mishonga yemapurisa.
Chinhu chinyorwa: https://www.france24.com/en/20190517-bourse-paris-persed-the-red-a-my-day-063
Rubatsiro kune vanhu vanovhiringidzika: Bhizimusi reNyika rinopa 35 mabhiriyoni ezve FCFA kune imwe purogiramu yekuchengetedza